दुश्मनको समाजलाई कसरी नष्ट गर्ने | रिपोर्टर्स नेपाल रिपोर्टर्स नेपाल
दुश्मनको समाजलाई कसरी नष्ट गर्ने
एल. टोड वुडः म दुश्मनको समाजलाई नष्ट गर्न चाहन्छु र दीर्घकालीन उद्देश्य र मुद्दासहित समाज आफै ध्वस्त हुने गर्थें र सो कार्यको बचाउ गर्ने क्षमतालाई बनाउँथे भने निम्न कार्यहरू गर्ने थिएँ:
१) म देशलाई निर्माण गर्ने र यसलाई सँगै समाहित गर्ने धार्मिक आदर्शहरूलाई ध्वंस पार्नेछु, जसले यसलाई फस्टाउन र असाधारण हुन दिन्छ । छोटकरीमा भन्नुपर्दा, पश्चिमी देशलाई ध्वस्त गर्ने हो भने म पश्चिमी देशको ईसाईंलाई नष्ट गर्नेछु ।
२) म परिवार, समाजको ढाँचा नष्ट गर्नेछु । म एकल परिवारलाई बिच्छेद गर्नेछु, त्यसले स्थिर बच्चाहरू, राष्ट्रको सम्पत्ति र शक्तिमा भविष्यका योगदानकर्ताहरू उत्पादन गर्दछ । म एक “समल्गिी एजेन्डा“ लाई बढावा दिनेछु, जुन प्रजनन क्षमतालाई लक्षित गर्दछ र त्यसपछि जन्म दर कम हुन्छ । म बच्चाहरूलाई भ्रमित गर्नेछु । म शताब्दीयौं पुरानो पारिवारिक एकाईलाई नष्ट गर्नेछु जसले अमेरिकीहरूको पुस्ता निर्माण गथ्र्यो । जुन पृथ्वीको सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र बन्न पुग्छ । पुनरुत्पादन नगर्ने समाज मर्ने समाज हो ।
३) म “विषाक्त पुरुषत्व“ र कट्टरपन्थी नारीवादको अवधारणालाई बढावा दिनेछु । समाजलाई कम पुरूष बनाउने र कम्तीमा कडा सैन्य सेना बनाउन सक्ने उत्तम उपाय खोज्ने छु र म सशस्त्र बलमा बढीभन्दा बढी महिला राख्न चाहान्छु । म महिलाहरूलाई अग्रपंक्तिको पैदल सेनामा राख्ने धक्का दिनेछु । अफिसमा प्रशिक्षण हाई हिल्स बनाउँछु । संक्षेपमा भन्नुपर्दा, म पुरुष जनसंख्यालाई नारीवाद गर्नेछु, यसलाई युद्धमा कम प्रभावकारी बनाउने छु ।
४) म शिक्षा प्रणाली नष्ट गर्नेछु । म मार्क्सवादी प्राध्यापकहरूलाई विश्वविद्यालय प्रणालीमा नयाँ पुस्तालाई अमेरिकी इतिहासको बारेमा केही न सिकाउन बारेमा सहमत गराउँछु । उनीहरूको पुस्तालाई कम्युनिष्ट प्रचारले भरिदिनेछु र भ्रमित गर्नेछु । उनीहरूलाई वाशिंगटन, लिंकन वा जेफरसनबाहेक अरू केही थाहा हुँदैन ।
५)“बिभाजन र झगडा” भन्दा राम्रो तरिका जनसंख्याको दिमाग भ्रमित गरेर म दौडहरू विभाजन गर्ने छु । पुलिसको क्रूरताले, र कानून प्रवर्तनप्रति घृणाको संस्कृति विकास गर्नु नै उत्तम तरिका हो ।
६)म संघीय सरकारलाई भ्रष्ट पार्नेछु । म देशको स्थापनाको देशद्रोहीहरूका साथ खुफिया र सुरक्षा सेवाहरू भर्नेछु । जब कुनै राजनैतिक व्यक्तिले मेरो क्रुर वा शैतानी एजेण्डालाई धम्की दियो भने, म यी भ्रष्ट एजेन्सीहरूलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाको दुई पटक निर्वाचित राष्ट्रपति भए पनि अमेरिकालाई माया गर्ने कुनै उदाउँदो तारालाई लक्षित गर्न प्रयोग गर्ने छु ।
७) म जनसंख्ययाको बचावटका साधनहरू हटाउनेछु–यसको अर्थ, म तिनीहरूका बन्दुकहरू लिन्छु । सशस्त्र जनताको डरले कुनै पनि आक्रमण गर्ने छैन । म यस समस्याबाट छुटकारा पाउने कोशिश गर्नेछु ।
८) आधा भन्दा बढी जनसंख्यालाई सरकारमा निर्भर बनाएर स्वयंको हेरचाह गर्न असमर्थ बनाई आत्मनिर्भरता र चतुरतालाई नष्ट गर्ने छु ।
९) म “पुरानो अमेरिका“ सँग सम्बन्धित कुनै पनि दृष्टिकोण वा विचारहरू पूर्ण रूपमा हटाउन ठूला प्रविधि प्रयोग गर्ने छु । म इन्टरनेटबाट उनीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउँनेछु । तरंग बनाइरहने इन्टरनेट लिने छु । म अन्य अत्याचारी शक्तिहरूसँग इन्टरनेट बन्देज विकास गर्न कार्य गर्दछु ।
१०) म पैसाको साथ देशको नेतृत्वलाई भ्रष्ट पार्नेछु, जसले चाँदीका टुक्राहरूको लागि देश बेच्नेहरूलाई भेट्टाउँथे । म तिनीहरूलाई सुनिश्चित गर्छु कि तिनीहरू रणनीतिक रूपमा शक्तिशाली स्थितिमा राखिएको थियो । म मेरो एजेन्डाको विरोधमा कुनै कानुन पारित नभएको सुनिश्चित गर्न सम्पूर्ण विधायिकामा पैसा खर्च गर्छु ।
११) म देशको प्रतीकहरूको अनादर बढाउन प्रचार गर्ने छु । म राष्ट्रिय गानको बखत व्यक्ति घुँडा टेक्ने, झण्डा जलाउने, राष्ट्रको इतिहासका मूर्तिहरू ध्वस्त पार्न चाहन्छु । म मानिसहरूलाई उनीहरूको देशको कपडालाई घृणा गर्ने बनाउनेछु जसले उनीहरूलाई यस्तो सम्पत्ति र शक्ति प्रदान गर्यो ।
१२) म एउटा झल्लु मानिस खोज्ने छु, एउटा देश जसले अमेरिकालाई पनि दुस्साहसपूर्ण शत्रु बनाएको छ, म यो झल्लु मान्छेमा सबै नकारात्मक उर्जा र पुनःप्राप्तिलाई केन्द्रित गर्ने छु। यस तरीकाले लक्षित राष्ट्र मेरो वास्तविक अभिप्रायलाई बेवास्ता गर्ने छ ।
लक्षित देशको यी सबै परिवर्तनलाई प्रवद्र्धन गर्ने शासन विश्वको सबैभन्दा ठूलो कम्युनिष्ट शासन हुनेछ । योसँग १०० वर्षको योजना हुनेछ यसका दुश्मनहरूलाई नाश गर्न र यस ग्रहमा प्रभुत्व जमाउने, यातना शिविरमा यसको आफ्नै लाखौं नागरिकहरू हुनेछन् । यसले महिलामा गर्भपतन र उनीहरूको बाँझोपनलाई यसको आफ्नै सीमाहरूमा पुनरुत्पादित गर्न नचाहनेलाई बाध्य पार्छ । यसका धेरै कामदारहरू दासको रूपमा जीवन बिताउँथे र जीवनको कुनै अर्थ नै थिएन । यस कारखानाका छानाका वरिपरि आत्महत्या गर्ने जालहरू थिए जसले यी मजदुरहरूलाई निराशामा मार्न रोक्न सके । यस राष्ट्रले हजारौं आफ्नै नागरिकलाई मार्नेछ जसले स्वतन्त्रताको भविष्यको लागि खडा हुने आँट गर्ने छ ।
मैले माथि लेखेको सबैकुरा अहिले तपाईंको आँखाको अगाडि भइरहेको छ
म तिमीलाई संकेत दिनेछु यो रूस होइन ।
(वुडको १९ अगष्ट सन् २०१८ मा प्रकाशित लेख वासिंगटन टाइम्समा प्रकाशित हो ।)
‘मानव अधिकारप्रतिको प्रतिवद्धता मात्रै आउँछ, परिपालना हुँदैन’
– कालिका खड्का : काठमाडौँ, २३ मङ्सिर : मानव अधिकार प्रत्याभूतिको प्रतिबद्धता जनाउने तर, कार्यान्वयनमा
सीमामा सेना वा रोवोर्ट पठाउदैमा केहि हुँदैन, ठाँउको ठाँउ गाली हान्न पाउनुप¥यो
काठमाडौं, मंसिर १८ । सिमा सुरक्षाविद तथा सशस्त्रपूर्व एआइजी डा.कृष्णकुमार (केके) तामाङले नेपालसंगको सिमा समस्या
विद्याले जीवनभर निष्ठाको राजनीति गरेकालाई हराउँदाको चुनौती
दिलिप बाबु शिवा: हिजो चुनावि दौडमा हामी अस्तिवको लडाईमा थियौ।आफ्नो आस्था र सिद्धान्तले जित्नुपर्ने हठ
–भगवान गिरी : नेपालबाट युरोप छिर्ने सपना धेरै नेपालीमा छ । जीवनलाई सफल बनाउन भन्दै
किन पतन हुन्छन् कमजोर देशका बलिया नेता
दीपेश केसी: बोलिभियाका वामपन्थी राष्ट्रपति इभो मोराल्स राजीनामा दिन वाध्य भए । मेक्सिकोको निर्वासनमा रहेका
–श्याम रिमाल : काठमाडौँ, २७ कात्तिक । नेपाल बङ्गलादेश मैत्री सङ्घले बङ्गलादेशसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध मजबुत
भारतले चीनसँग लडाइँ लडुन्जेल बस्ने भनेको कालापानी छोड्दै छोडेन
डा. भेषबहादुर थापा: नेपाल भारत सीमाको नक्साको अध्ययन गर्दा कालापानी, लिपुलेकमा हाम्रो हक अधिकार छ